Vaovao - Fampidirana ireo toetra sy tombony azo amin'ny fandrefesana ny maripana sy ny milina fampidirana endrika
Mba hamehezana ny fihanaky ny viriosy, ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny tanana dia ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny toerana, izay misy fatiantoka amin'ny fahombiazan'ny ambany sy ny risika be.
Ny refin'ny mari-pana amin'ny taranaka faharoa an'ny Aopvision sy ny milina famantaran-tarehy amin'ny endriny rehetra dia mampiasa modely infrareda haingam-pandeha sy algorithma ambony momba ny tarehy. Raha tsy ilaina ny fiaraha-miasa mavitrika amin'ny mpiasa, ny fandrefesana ny maripanan'ny vatan'olombelona dia hafainganam-pandeha 0,3s, ny mari-pahaizana fandrefesana mari-pana dia mahatratra ± 0.3 ° C, ary ny hafainganam-pandehan'ny tarehy dia 0.2 s. Mampihena amin'ny fomba mahomby ny olan'ny fitohanan'ny mari-pana eo amin'ny fidirana sy ny fivoahana ary mampihena ny fifindran'ny olona.
Ny refin'ny maripana ataon'ny Aopvision sy ny milina fampidirina amina tarehy dia mamaha teboka mararin'ny mpampiasa indrindra:
1. Olana amin'ny fahitana hafanan'ny mpiasa
Amin'izao fotoana izao, ny fidirana sy ny fivoahan'ny vondrom-piarahamonina, orinasa ary tranobe maro dia mbola mampiasa fomba fitiliana amin'ny tanana mba handrefesana ny maripanan'ny olona miditra sy mivoaka. Misy ny fandrefesana ny maripana miadana, ny vidiny ambony, ny risika mihatra amin'ny mpiasa ary ny fihanaky ny tsimok'aretina vokatry ny fitohanan'ny olona. Ny fandrefesana ny maripana ataon'ny Aopvision sy ny milina fampidirana ny tarehy, raha tsy misy fifandraisana an-tanana, dia mety hahatratra ny fandrefesana ny maripana marina, ny fanairana amin'ny hafanana avo, ny fampahatsiarovana ny saron-tava, sns.
2. Ny olan'ny fidiran'ny mpiasa
Ny famantaran'ny tarehy dia afaka mamaha amin'ny fomba mahomby ny olan'ny fidiran'ny mpiasa sy ny fanamarinana ny mombamomba azy. Ny olona tsy mahazatra dia tsy mahazo miditra amin'ny alàlan'ny karatra swiping, ny làlana manaraka sns. Mandritra izany fotoana izany dia afaka mandrefy ny mari-pana amin'ny tarehy sy ny mpanatrika koa ireo orinasa hanatsarana ny fahombiazan'ny asa sy hiantohana ny fiarovana ny mpiasa.
3. Na hanao fanandramana sarontava
Ny fandrefesana ny mari-pana Aopvision sy ny milina fampidirana tarehy dia afaka mamantatra haingana raha mitafy sarontava ny olona Raha tsy manao saron-tava ianao dia haneno fanairana mandeha ho azy ilay masinina, mandrara ny fandalovana, ka mitaona ny masony handalo maska ​​ara-potoana mba hampihenana ny loza ateraky ny fifindran'ny otrikaretina.
4. Fantaro mora ny olona manao sarontava
Mandritra ny valanaretina dia samy manao saron-tava daholo ny tsirairay ary tsy afaka mampiasa fanekena endrika. Ny refin'ny mari-pana Aopvision sy ny milina fanatrarana tarehy dia manana traikefa tsara kokoa amin'ny fanekena ny tarehy ambony indrindra.
Ny tena mampiavaka ny fandrefesana mari-pana an'ny taranaka faharoa an'ny milina Aopvision:
1. Manatsara ny marina sy ny hafainganan'ny fanekena sarontava
2. Mamaha ny olan'ny fanekena teboka avo ho an'ny olona lava sy fohy
3. Miorina amin'ny fampiasana sary amin'ny mari-pana amin'ny mari-pana thermopile infrared, ny fanarahan-dia matrix fanavaozana ny taranaka faharoa, ny fanekena ny efijery feno dia tsy mila bika tarehy, izay haingana sy marina kokoa
4. Hamafiso ny fahafaha-manao fanoherana ny fitsabahana amin'ny tontolo iainana ivelany
5. Fanafihana fanoherana in-vivo anti-fanaovana hosoka rehefa mandrefy ny mari-pana
6. Mitohy manatsara sy manatsara ny rindrambaiko mpanjifa
Endri-javatra lehibe amin'ny fandrefesana ny mari-pana amin'ny taranaka faharoa sy ny milina fampidirana endrika:
· Fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vatana tsy mandeha amin'ny laoniny, fanangonana mari-pana amin'ny vatan'olombelona infrareda avo indrindra rehefa miborosy tarehy, haingana sy mahomby;
· Ny halavan'ny mari-pana 30-45 (℃) mari-pahaizana ± 0.3 (℃);
· Fantaro ho azy ny olona tsy misaron-tava ary manome fampitandremana amin'ny fotoana tena izy;
· Tohano ny fandrefesana ny mari-pana lavitra, fampitandremana amin'ny fotoana tena izy;
· Fanohanana ny data data SDK sy HTTP protokol docking;
· Fisoratana anarana mandeha ho azy sy fandraketana fampahalalana, ialana ny fiasan'ny tanana, hanatsarana ny fahombiazany ary hampihena ny vaovao tsy ampy
· Manohana ny fikarohana mivantana ny masolavitra;
· Ny algorithm manavaka tarehy tsy manam-paharoa dia manaiky tsara ny tarehy, ary latsaky ny 500ms ny fotoana fanekena ny tarehy;
· Manohana ny fivezivezena ataon'ny mpiasa eo ambanin'ny tontolo iainana matanjaka ary manohana ny fahitana masinina ≥80dB malalaka;
· Amin'ny alàlan'ny rafitra fiasa Linux, tsara kokoa ny fitoniana eo amin'ny rafitra;
· Fampifanarahana interface tsara, manohana ny protokol SDK sy HTTP eo ambanin'ny Windows / Linux sy ireo sehatra hafa;
· Fampisehoana IPS HD 8-inch;
· IP34 tsy misy vovoka sy tantera-drano;
· Fotoana eo anelanelan'ny tsy fahombiazana MTBF ＞ 50000 H;
· Manohana tranokala fampitahana tarehy 22.400 sy rakitsoratra fanekena tarehy 100.000;
· Tohano iray fampidirana Wiegand na output Wiegand;
· Manohana ny fidiran'ny zavona, ny fihenan'ny tabataba 3D, ny famoretana ny hazavana mahery vaika, ny fanoherana ny fihoaram-pefy elektronika ary ny fomba fandanjalanjana fotsy isan-karazany, mety amin'ny filan'ny sehatra isan-karazany;
· Manohana ny fandefasana feo elektronika (ny toetran'ny mari-pana amin'ny vatan'olombelona dia fanairana ara-dalàna na avo lenta, valin'ny fanamarinana ny tarehy);
· Asa maharitra maharitra amin'ny tontolo 0 ℃ ka hatramin'ny 50